Vaovao - Ny tsy fitovian'ny landy sy ny landy mulberry
Volom-pirinty vita amin'ny landy
Tranga ondana poly
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny landy sy ny landy mulberry
Ny tsy fitovizan'ny landy sy ny landy mulberry
Rehefa avy nanao landy nandritra ny taona maro dia tena azonao ve ny landy?
Isaky ny mividy akanjo na entam-pianakaviana ianao dia holazain'ny mpivarotra aminao fa lamba landy io, fa maninona no samy hafa ny vidiny? Inona no maha samy hafa ny landy sy ny landy?
Olana kely: inona no tsy itovizan'ny landy amin'ny landy?
Raha ny marina, ny landy dia manana singa landy, fanavahana mora takatra. Ny landy dia misy landy, fa misy karazana landy koa. Raha sarotra ny manavaka azy ireo dia tsy afaka misaraka amin'ny singa fibre fotsiny izy ireo.
Ny landy dia tena landy
Amin'ny akanjo ampifandraisin'ny besinimaro dia matetika lazaina fa vita amin'ny lamba landy io akanjo io, fa rehefa manombana ny firafitry ny akanjo, landy = landy mulbera 100%. Izany hoe, firy ny landy ao anaty landy.
Mazava ho azy, ankoatry ny singa vita amin'ny landy, dia misy lamba maro hafa mifangaro. Fantatsika fa misy karazany maro ny landy, toy ny landy mulberry, landy mulber Shuanggong, landy voahidy, ary landy selestialy. . Ny landy samy hafa dia samy manana ny vidiny ary samy manana ny mampiavaka azy, ary ny lamba landy misy landy ampiana dia manana "silky" tsy manam-paharoa, fahatsapana malama, ahazoana aina, mihaja ary kanto.
Ny mpiorina indrindra amin'ny landy dia iray amin'ny kofehy biby, ary ny fizotran'antoka voalohany indrindra amin'ny landy iraisanay dia mampiasa landy mulberry betsaka, fantatra koa amin'ny hoe "landy tena izy".
Amin'ny ankapobeny ny landy dia azo ilazana ny landy, saingy tsy manilika ireo kofehy simika sy lamba landy hafa misy toetra mampiavaka ny fibra mba afangaro.
Taorian'ny firoboroboan'ny zava-kanto fanenomana, ny olona dia nanampy fangaro lamba isan-karazany, ka ny firafitra sy ny endrika landy dia samy hafa be, ary ny lamba hita maso ihany koa dia manana fomba fampisehoana isan-karazany.
Adiresy:No 88 Xingwang Street, Shengzhou, Shaoxing, Zhejiang, China